ရွာ အစည်းအဝေး အပိုင်း ၃ ( ခ ) / အကျွေးအမွေး အစီအစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွာ အစည်းအဝေး အပိုင်း ၃ ( ခ ) / အကျွေးအမွေး အစီအစဉ်
ရွာ အစည်းအဝေး အပိုင်း ၃ ( ခ ) / အကျွေးအမွေး အစီအစဉ်
Posted by Foreign Resident on Oct 7, 2011 in Creative Writing | 52 comments
Kindly forgive me for disturbing your post.
ရွာအစည်အဝေးကို အစုံအလင်တက်ရောက်အားပေးနေတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ / ဗိုက်ဆာလာသူ များ အတွက်
ကြိုက်ရာစားရတဲ့ ဘူးဖေး အစီအစဉ် စတင်ပါပြီ။
အစည်းအဝေးမှာ ဒီလောက် ရွာသူရွာသားတွေ အစုံအလင် တက်တယ်ဆိုမှတော့ အစည်းအဝေးပြီးရင် လိုအပ်တာမှာစားတဲ့ အစီအစဉ်လာမှာမို့လို့ ဖြစ်ရမယ်။
အစားက ဘယ်တော့ စားရမှာလဲ။ ကျွေးပါတော့ဗျို့….။
ဧကန်န ၀ါးရင်းတုတ်ကြီးနဲ့ တဒေါင်ဒေါင် မြည်အောင် ထုနေသူက ကိုကြောင်ကြီး ဖြစ်ရမယ်။
ကျွေးမွေးတဲ့အစီအစဉ်ရောက်ရင် ကြိုက်ရာစားရတဲ့ ဘူးဖေးကျွေးပါဗျို့
ဆူးရေ ရွာသူ/ ရွာသားတွေရဲ့ အဆိုတင်သွင်းမူတွေကတော့ အံမခန်းပါပဲ
ဒါနဲ့အစားအသောက်အစီစဉ်က ဘယ်တော့လဲ မသိဘူး အင်တာဗျူးတာ များလို့
ရွာအစည်အဝေးကို အားပေးနေတည်းရွာသားတွေကိုလည်းဘာကျွေးမှာလည်းဗျို.. ကျွန်တော်တစ်ခုအကြံပြုချင်တာကတော. အစည်းအဝေးထိုင်သူ အားလုံး မှတ်ပုံတင်ရှိကြရဲ.လား မှတ်ပုံတင်ရှိရင် ရွာသားများကို ဓါတ်ပုံများ ပြကြပါ….:P
Days Inn Xian
Garden Hotel Su Zhou
Hang Zhou Geshan Prince Hotel
Shanghai Puxi New Century Hotel
My dear Villagers,
Now, you can enjoy your Buffet Meal, Hee Hee Hee
“ Just Kidding Naw, Please, Don’t take it seriously ”
It was not surprised, I gained (3) Kgs after this trip.
မိုက်တယ်… ထိုင်စားရမလား မတ်တတ်ရပ်စားရမလားတောင် မပြောတတ်တော့ဘူး။ ဘူဖေးကျွေးတာလား။ ကြက်ဥအစိမ်းတွေက ဘယ်လိုစားရမှာလဲ။ စည်းဝေးပွဲမတက်လာတဲ့ မနောကိုကော ကျွေးမှာလား……….
ဗိုက်ဆာနေတာနဲပ အတော်ပဲ အားပါးတရ စားသောက်သွားပါတယ် :D
မနက်က ရွာ အစည်းအဝေးမှာ ဟိုပြေးဒီပြေး ပြေးပြီး ဗျူးနေရလို့ နွယ်ပင်ကတော့
ထိုင်ပြီး စားသွားတယ် ……….
Yes, they are ” ဘူဖေးကျွေးတာ ”
Those are not ” ကြက်ဥအစိမ်း ”
They are boiled egg.
But, the strange thing is,
They were boiled by Tea ( လဘက်ရည် ).
It is Chinese Custom.
အဲ့ဒီ ကြက်ဥ လ္ဘက်ခြောက်ဆိုတာ … ဒီမှာလည်း ပေါ်နေပါပြီ ကို နိုင်ငံခြားသားကြီးရဲ့ … ။
အစကတော့ … လူတွေပေါက်ပေါက်ရှာရှာလုပ်စားတယ်ထင်တာ .. တကယ်တော့ တရုတ်တွေရဲ့ အစားစာ ဖြစ်နေတယ် .. စားလို့တော့ အတော်ကောင်းပြီး မွှေးလည်း မွှေးတယ် … ။
တုံရဲ့ အဲ့လိုစားကောင်းအောင် ၆ နာရီ ကြာအောင် ပြုတ်ရတာတဲ့။ ကြားဖူးတာပြောတာနော်။ ဘူဖေးဆိုလို့ ကြုံလို့ ပြောဦးမယ်။ တောသူမြို့ရောက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလေး။ ရှက်လို့ ဘယ်သူ့မှတောင် မပြောရဲဘူး အခု လူစုံတုန်းလေးပဲ ပြောတာ။ ဘန်ကောက်မှာ ကြုံခဲ့တာလေး ကိုယ်တည်းတဲ့ ဟော်တယ်က မနက်စာ ဘူဖေးကျွေးလို့ သွားစားပါတယ် လိုက်ကြည့်လိုက်တာ ဘယ်ဥစ္စာစားရမှန်း မသိလို့ အကြာကြီး လည်နေတာ။ ၀ိတ်တာက မသင်္ကာတာ့ဘူး ထင်ပါ၇ဲ့ အနောက်က တကောက်ကောက်လိုက် ကိုယ်က ရှက်လို့ အသာရှောင်ထွက် သူကတခါ ပတ်လိုက်နဲ့ ၀ိုင်းကြီး ပတ်ပတ်ကို ဖြစ်နေတာ။ နောက်ဆုံး သားကို မုန့်ကျွေးနေတဲ့ ချစ်ချစ်ကြီး အနားရောက်လာပြီး ကူညီမှ အိုကေ သွားတယ်။ တောသူဆိုတော့ ဘူဖေးမှ စားဘူးတာကိုးလို့။
Tea egg ကို ထိုင်ဝမ် မှာ ၂၄နာရီ convenience store မှာ ရတယ် ။ Century egg ဆိုတာလည်းရှိတယ် ။ FYI
Tea egg isatypical Chinese savory snack commonly sold by street vendors or in night markets in most Chinese communities throughout the world…..
In Taiwan, tea eggs areafixture of convenience stores. Through 7-Eleven chains alone, an average of 40 million tea eggs are sold per year.
Also some people would say that the tea eggs’ flavor is very addictive. It tends to linger in one’s mouth because of the star anise used in the preparation. This spice has also commonly been used in teas from other countries, where they also reportasimilar addictive quality. Tea eggs can be made with or without cracks, but will still have the same flavor, butadifferent appearance. The most traditional way to prepare them is simply to make cracks in the shells after they are finished hard boiling, but before one soaks or boils them in the brine made out of tea, sugar, soy sauce, star anise, and cinnamon. All of these ingredients can be modified depending onaperson’s preference. Soaking the eggs for longer will result in more flavor.
Wikimedia Commons has media related to: Tea eggs
* Soy egg
* Salted duck egg
* Iron egg
အင်း ကျွန်တော်တို.ကျတော့ မှောင်ခိုလက်မှတ်နဲ. အစည်းအဝေး တက်ရတော့ နာမည်စာရင်းမပါလို.
အဲဒါတွေ မစားရတော့ဘူးပေါ့ အဟင့်…..
ဒါပေမယ့် သူများစားရတော့ ကိုယ်ငတ်သလို သဘောထားပြီး ကြည့်သရေကျသွားပါတယ်..
” မှောင်ခိုလက်မှတ်နဲ. အစည်းအဝေး တက်ရတော့ ”
All villagers are invited & cordially welcome.
စားချင်နေရတဲ့ကြားထဲ လာပြနေတယ်။ တကယ်လည်းမစားရဘဲနဲ့။ အော်ငိုလိုက်မှာနော်
ရင်ထဲ မွန်းကြပ်လို့ ဂေဇတ်ကပြန်ထွက်မယ်အလုပ်…
တွယ်သွားအုံးမှဘဲ…ဆူးမမစာကခုဏ ကဧည့်သည်အနေနဲ့ ဖတ်ပြီးလို့ ..
သူကြီးနဲ့ ဦးကြောင်တို့ မလာခင်ဆွဲတော့မယ်…
မို့ မို့ မျက်စိရှေ့ ..တောင်ရှည်ဆွဲဆွဲပြီး…ချွေးသုတ်နေမှ….အော့..ရွံ့ တယ်
I choose the last one, it looks delicious & full enough for me..
You know how starving I am
What’s inside in the bowl? It look likes ကြေးအိုး
Dear Moe Z,
It is not ” ကြေးအိုး ”
Actually, everything inside this bowl is chosen by me,
( I put whatever I thought tasty, noodle, vege, meat balls & etc )
The chef ( in this counter ) put mines into meat soup & just boil it.
Finally, you can imagine, the taste is terribly ( bad ).
အားရပါးရ စားသွားပါတယ်ဗျို့ …. (၄)ပုံမြောက်က ဦးဖောရိန်းကြီးလား ….. ….. အစားအသောက်အတွက် သဂျီး ချွေးတွေ ထပ်ထွက်နေမှာဆိုးလို့ ဦးဖောရိန်းကြီးကပဲ ဒါနပြုလိုက်ပါတယ်တဲ့ ………… အပြင်မှာလဲ ရွာသားတွေကို ဒီထက်ပို ကျွေးနိုင်ပါစေလို့ …………
(၄)ပုံမြောက်က ဦးဖောရိန်းကြီးလား ???
Sorry, it is not me.
လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို တိုက်ရိုက်လွှင့်နေရတာနဲ့ ဗိုက်တာဆာလာပြီ
မကျွေး ကျွေး ၀င်တွယ်မယ်ဗျ … :D
အန်ကယ်ဖောကြီး @ လောပန်ကြီးရေ
နောက်ဆုံးပုံက ခြေထောက်ကိုကြည့် ရတာ
ကိုဖေါရိန်းက နည်းနည်း ၀နေတယ်နဲ့တူတယ်ဗျ
Yes “ဘီလူးကြီး”ogre ,
too fat, BMI index 27.
သဂျီးလည်း ပွိုင့်ပေးရမှာနဲ့တင် အိမ်တိုင်ချွတ်ရမလိုဖြစ်နေတော့ ဦးဖောကပဲ ဒါနပြုတယ်ထင်ပ့ါ
ဒါနဲ့ ဦးဖောပိုပြီးဒါနမြောက်အောင် ပါဆယ်ယူသွားတယ်နော်
အိမ်ကလူတွေအတွက်ရော၊ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ မ,သွားတယ်
FR ရေ- အားရပါးရ တ၀ကြီး ကျွေးတာ ကျေးဇူးပါ။
သို့သော်- ကျွေးကား ကျွေး၏ မ၀…….
အကျွေးအမွေး အစီအစဉ်ပြီး ရင် သူကြီး က gazette က အထူးအစီစဉ်အနေနဲ့… လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ
မဲဖောက်ပေးမယ်လို့ … ကြားလိုက်သလားလို့….
lone ရဲ့ ဦးကြောင်လည်း မတွေ့ပါလား… စားဖိုခန်း မှာ ငါးရိုးသွားရှာနေတယ်ထင်ပါ့… ဒါမှမဟုတ် အစားလွန်ပြီး… toilet က မထွက်နိုင်ဖြစ်နေတာများလား…
Ummmmm, ” lone ရဲ့ ဦးကြောင် ”
Somebody missing you ” ဦးကြောင် ”
Situation seems improving ” ဦးကြောင် ”
Lone, just kidding naw.
လုံးအနားမှာ ဦးကြောင်ရှိတယ်လေ။ စားချင်ရင် စားပစ်လိုက် စားပစ်လိုက်။ :razz:
lone နား မှာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး.. lone ကလာမှမလာတာ..မအားလို့… ရှိရင်လည်းတွန်းထုတ်
ပစ်မှာ… ကြောင်ဆိုမုန်းလို့… ကြောင်ချေးကနံတယ်….
ပြောရက်လိုက်တာ လုံးရယ်။ ကြောင်ချီးကနံတယ်ဆိုတော့ လူချီးကရော မနံလို့လား။ လုံးကိုကိုက မနံဘူးလို့ မပြောနဲ့နော်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဖြစ်ခြင်းဖြစ် ဝမ်းချုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အတော်ကျန်းမာရေးခြူခြာတဲ့ကောင်၊ မမြင်ဘူးပေမဲ့ပြောလိုက်မယ်၊ ဓာတ်မသွားမှတော့ အသားအရည်က မဲခြောက်ခြောက်နဲ့ လူကပိန်လှီနေမှာ သေချာတယ်။ ဝမ်းချူဖို့ဆိုရင် ဘကြီးပုဆိုတဲ့ ဆရာတယောက် ထိုင်းမှာအတော် စွမ်းတယ်ကြားတယ်။ အမြန်ဆက်သွယ်ခိုင်းလိုက်။။
ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲ လို့ ခိုင်လုံသော သတင်းဌာနက သတင်းရရှိပါတယ်။
By the way, FYI,
In 7th photo ( at Garden Hotel Su Zhou )
I ate ချဉ်ပေါင်ကျော် & မျှစ်ကျော် in China !!!!!
တောင်ရှည်ကို.. ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး.. စားတော့မှနဲ့တူတယ်..။
I didn’t take particular photo of ” ချဉ်ပေါင်ကျော် ”
The taste of those ” ချဉ်ပေါင်ကျော် ” is not sour,
Let’s say, between sour & bitter.
I am not so sure, the leaf is ” ချဉ်ပေါင် ” ( just think )
But you can see ” မျှစ်ကျော် ” in 7th photo.
I think there’re3kinds of ချဉ်ပေါင်ရွက်
may be the one you tasted is ချဉ်ပေါင်ခါး
it shapes man’s fingers andabit rough and it taste bitter
ထိုင်ဝမ် မှာချဉ်ပေါင်ကျော် ကို မြန်မာ ထမင်းဆိုင် ကလွဲရင် ဘယ်မှာမှ မရနိုင် ဘူး ။ မြန်မာ ထမင်းဆိုင်မှာ တနှစ်ပါတ်လုံးရတယ် ။ ထိုင်ဝမ်သား တွေချဉ်ပေါင် မစားဘူး ။ ချဉ်ပေါင် ပေါ်ချိန် စိုက်ပြီး မြန်မာရပ်ကွက် ဈေးမှာ လာရောင်း တယ် ။ မြန်မာ တွေဝယ်ပြီး ဆီနဲနဲ နဲ့နှပ် ပြီး freezer ထဲ လှောင်ပြီး စား ကြတာပဲ ။
” အပြင်အဆင်ကလည်း.. သပ်ရပ်တယ်. ”
The cheapest room in ” Days Inn Xian ” is
1390 Yuans/day ( 200 US$/day )
မျက်စိ နဲ့ အစာကြွေးတယ်ဆိုတာ အဲဒါ ပါပဲ ကွယ်ရို့၊ စားကြစားကြ ရွာသားတို့———-။
အိပ်မက်ထဲပါ ယူသွားပြီးစားကြနော် ——— ( ဒေါင် ဝေါင် ဝေါင် ဝေါင် ညှောင် ) – ကြောင်အော်သံ ပါ အဆစ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါသည်။ ကြောင်ကြီး၊ကြောင်သေး၊ ကြောင်ဝတုတ်ပါမကျန်အောင အကုန်ပါ စေ သော် ။
မမဆူးရေ စားလို့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ……………..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ……..လက်ဆောင်က ဘာတွေပါလဲဗျာ ကံစမ်းမဲထဲမှာပြောကြပါဦးဗျာ
လက်ဆောင်တွေက ပို့(စ်) တင်ရင်မြန်ဆန်နိုင်အောင်လို့ အသစ်ထွင်ထားတဲ့ motor တပ်
keyboard ရယ်၊ computer အကြည့်များသူတွေအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်မျက်မှန်ရယ် ၊ သူကြီး ရဲ့
မိန်းမ ရယ်….. …. အစရှိတာတွေကို မဲဖောက်ပေးမှာပါ …… …..
တတိယပုံက တရုတ်လမုန့်လေးက စားချင်စရာလေးနော် အခင်းအကျင်းကလဲကောင်း အစားအသောက်ကလဲကောင်းဆိုတော့ အားရပါးရ ၀င်လွေးလိုက်ချင်စမ်းပါဘိ
12th Sept is Moon Cake festival Day in China.
That’s why, they served usalot of varieties of Moon Cakes.
I ate4varieties/type (each half) of Moon Cakes.
ဗိုက်စာပါတယ်ဆိုမှ ရေနွေးသောက်ပြီး အမြင်နဲ.စားလိုက်တယ်ဗျာ.. ကျေးဇူးပဲ..ဂလု…
နောက်လည်း ဒီထက်မကကျွေးနိုင်ပါစေ..စကားမစပ် ကြောင်စာလည်းမတွေ.၀ူးနော်.. ဟီး…
သြဇီ ဦးဖော ပေါက်မုန့်တွေ ထောပတ်တွေ အမြင်ကတ်နေတာလား မသိဘူး.. စားဖို့ ယူလာတဲ့ ပန်ကန်ထဲမှာ ဒီက အာရှာတိုက်သားတွေ အကြိုက်တွေပဲ ယူထားတာ တွေ့တယ်။
၃ကီလို တက်တယ် ဆိုလို့.. ဆူး ဆိုရင် ခရီးမသွားခင် ၅ပေါင်လောက် အနည်းဆုံး ကျအောင် ချသွားရတယ်.. ခရီးမှာ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းပြီး လမ်းလျှောက်ရ လျှောက်ရ ပြန်လာရင် ကျသွားတာနဲ့ တက်သွားတာ သိပ်မကာမိချင်ဘူး။ ဟိဟိ..
Yes, I don’t want to eat bread & butter in China.
I am sure, their bread & butter cannot be better than Aussie.
Moreover, I didn’t see Garlic Butter there. ( which is my favourite )
Furthermore, I prefer to take their regional & traditional foods.
ဦးဖောရိန်းလုပ်တာနဲ့ သတိရသွားပြီ …
တရုတ်ပြည်မှာ အကောင်းဆုံးက အစားစားရတာပဲ … ဈေးလည်းသက်သာတယ် … စားလို့လဲကောင်းတယ် … အလွယ်တကူလဲ ၀ယ်စားလို့ရတယ် …
တရုတ်ပြည်မှာ ခရီးသွားတိုင်3းstar အဆင့် ဟိုတယ်မှာပဲ တည်းဖြစ်တယ် … တရုတ်ငွေယွမ် ၂၀၀ လောက်ပဲ ပေးရတယ် … မနက်စာ ဘူဖေးပါပေမယ့် အခုပြထားသလောက်တော့ မများဘူး … ဒေသထွက်ကို အဓိကဦးစားပေးပြီး ဧည့်ခံတယ် …
Those Hotels are at least4or5stars ( Tour operator’s guarantee ),
The cheapest room in ” Days Inn Xian ” is 1390 Yuans/day ( 200 US$/day ).
Actually, If we were not travelled by Group Package Tour,
I admit, I cannot afford to stay like this (too expensive for me).
This is one of the advantages of Group Package Tour.
စိတ်ကူးနဲ့ ရူးနေရုံပေါ့ကွယ်……. ဟီးးးး တစ်ကယ်စားလို့မှမရတာ
အခုတော့— – လိုင်းပေါ်ကပဲမှန်းမျှော်ပြီးဟဲလိုက်တော့မယ်- – – ။
ဗျို့ … သဂျီး
ပေါက်ဖေါ်ကြီးလဲ မတွေ့ပါလား .. သဂျီးလဲ မျက်နှာကြီးက နီရဲနေလို့ပါလား ..
ဘူဖေးက ဘီယာတွေ ပေါက်ဖေါ်ကြီး နဲ့ပေါင်းပီး အကုန် ချပစ်လိုက်ပီလား ..
ဘူဖေးမှာ ဘီယာတွေတောင် မတွေ့ရတော့ဘူး ..
သားသားလဲ သောက်ချင်တယ် ..
ရဘူး .. ရဘူး ..နောက်တခါ ဘူဖေးထပ်လုပ်ပေး ..အခန်းဝက ကြိုစောင့်နေမယ် ။
ပုံထဲပြထားသလောက်ဘဲ စားပြီးထပ်မယူဘူးဆိုရင် FR 3Kg တက်လောက်စရာမရှိဘူးထင်ပါရဲ့၊
့ ကျွန်မသာဆို ပုံထဲက ၃ ပန်းကန်မှာ ၂ ပန်းကန်လောက်စားပြီးရင် လုံချည်လျှော့ဝတ်ရတော့မယ်၊
ဒါကြောင့် ဘူဖေးဆို မတန်လို့ မစားဖြစ်ပါ၊
ဒါပေမယ့် FR ကြွေးမယ်ဆိုရင်တော့ အားနာပါးနာ စားပေးရမှာပေါ့လေ။ :D
နံပါတ် သုံး ပုံဆိုရင် အကုန်စားမယ်3Kg လောက်ကတော့ ဘောလုံးတခါကန်တာနဲက ပြန်ကျသွားမှာပါ….ပြဿနာမရှိ